Blog - Chain Supply manaraka
Dropshipping dia iray amin'ireo maodelim-barotra malaza indrindra amin'izao fotoana izao. Nametraka ny tenany ho asa manan-danja miaraka amin'ny fampiasam-bola ambany sy malefaka. Na izany aza, tsy ampy ny fananganana magazay an-tserasera sy fampisehoana ny vokatrao; fampiroboroboana sy fahafaham-po ny mpanjifa dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fahombiazan'ny orinasa rehetra.
Iray amin'ireo mpamatsy orinasa toy izany, izay miasa ho toy ny sehatra mahomby hanombohana ny orinasanao dropshipping maimaim-poana manerana an'izao tontolo izao dia Nextschain. Andao hojerentsika ireo antony nahatonga an'i Nextchain ho mpisava lalana amin'ny indostria misy azy.
Safidy malalaka: NeXTchain dia manana sokajy maro samihafa ho an'ireo mpivarotra mampiasa ny Shopify APP, ahafahan'izy ireo misafidy vokatra marobe an'arivony avy amin'ny katalaoginy ary manampy azy ireo ao amin'ny fivarotany. Na izany aza, ilaina ny misafidy toerana manokana; raha mpivarotra vao manomboka, satria manampy amin'ny fahatokisana sy hamakafaka ny fangatahana tsena izany. Ankoatr'izay, mampihena ny risika ihany koa izy io.
Varotra sy varotra: Ny NeXTchain dia mamela ny mpampiasa hifantoka amin'ny ampahany amin'ny varotra sy ny varotra, satria ny manampahaizana azy ireo no mitantana ny fizarana sy ny fizotry ny fandefasana. Ny vidin'ny ambongadiny dia tsara indrindra eny an-tsena, ahafahan'izy ireo mahazo tombony ambonimbony kokoa ary mampitombo ny vola azony.
Drafitra samihafa: Amin'ny maha-vao manomboka azy, ny tsirairay dia te handefa ny orinasany miaraka amin'ny fampiasam-bola ambany. NeXTchain dia manana drafitra fanombohana izay maimaim-poana mandrakizay. Na izany aza, raha vao mahazo traikefa ny mpampiasa; tsara ny manavao ny drafitra tsara kokoa ho an'ny traikefa tsara indrindra.
Safidy fandefasana: NeXTchain dia iray amin'ireo mpamatsy dropshipping vitsivitsy izay mandefa baiko amin'ny ankapobeny manerantany amin'ny vidiny mirary. Ny rafitry ny lozisialy manan-tsaina dia manitsy azy ireo ary mandefa ny baiko mialoha mandritra ny vanim-potoana fara tampony toy ny Black Friday na Krismasy ho an'ny fandefasana ara-potoana.
Fitsipika media sosialy: Ny haino aman-jery sosialy dia iray amin'ireo fantsona mandresy lahatra indrindra ary manana ny fahafaha-mahazo varotra bebe kokoa sy hampitombo ny tombom-barotra. NeXTchain dia manampy ny mpivarotra appify amin'ny doka Facebook voafaritra sy voafaritra tsara amin'ny vokatra rehetra voatanisa. Ankoatr'izay, ahafahan'izy ireo mampiroborobo sy mitantana ny orinasany.
Fananganana ny marika: Noho ny fifaninanana be dia be, ny fananganana ny marika dia nanjary dingana ilaina amin'ny orinasa. Miaraka amin'i NeXTchain, ny mpampiasa dia afaka manonta ny sary famantarana izay nofidiny teo amin'ny boaty fonosana hisongadinan'izy ireo amin'ny fifaninanana. Vokatr'izany, ny mpivarotra dia afaka manangana fahatokisana amin'ny fotoana maharitra miaraka amin'ny mpanjifany ary mankafy ny tsy fivadihan'ny mpanjifa bebe kokoa.
Serivisy bebe kokoa: Mpanome tolotra maro no miantoka ny fanontana ny mombamomba ny orinasa mpampiasa amin'ny faktiora. Ny NeXTchain dia mamela ny faktiora namboarina maimaim-poana amin'ny baiko rehetra. Ankoatr'izay, raha misy olana kalitao amin'ny vokatra ao anatin'ny fito andro, ny mpampiasa dia afaka mahazo famerenam-bola tanteraka.
Noho ireo lafin-javatra etsy ambony ireo dia tonga toy ny iray amin'ireo marika azo atokisana indrindra eo amin'ny tsena manerantany i NeXTchain. Ny fikarakaran'ireo mpanjifany no manome ny serivisy aorian'ny varotra tsara indrindra. Ho fananganana fanatrehana an-tserasera dia iray amin'ireo fomba haingana indrindra hanombohana amin'ny fampiasam-bola ambany. Miaraka amin'ny serivisy dropshipping avo lenta an'ny NeXTchain, ny mpampiasa dia afaka mifantoka amin'ny kalitao ary koa amin'ny kalitao ary manatsara ny orinasany.